चोली नाप्दा इ’ज्जत जोगाउन मुस्किल: शा’रीरिक सुखप्राप्ति इन्कार गरेपछि युवती जागिर नै चैट! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > चोली नाप्दा इ’ज्जत जोगाउन मुस्किल: शा’रीरिक सुखप्राप्ति इन्कार गरेपछि युवती जागिर नै चैट!
admin October 14, 2020 October 14, 2020 जीवनशैली, समाज	0
काठमाडौं । आफ्ना मालिकलाई भौ’तिक सुख दिन नसक्दा एक युवतीले जागिर गुमाउनु परेको छ । भारत, गुजरातको सुरत सहरको विभिन्न भागमा यस्ता दुई घटनाहरू बाहिर आएका छन् । दुबै घटनामा प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेको छ र अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यद्यपि एक जना पनि आरोपीलाई पक्राउ गरिएको छैन । ती युवती कतारगामकी हुन् र उनी फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्न गइन् । समाचारको भिडियो हेर्त तल क्लिक गर्नुहाेस्***
कम्पनीमा काम सुरु गर्दा मालिक अंकित चोटालियाले सिकाउने वचन दिएका थिए । जानकारी अनुसार उनले ति युवतीलाई ल्यापटपमा काम सिकाउँछु भनेको खुल्न आएको छ । अंकितले ती युवतीलाई तिम्ले आगामी दिनहरुमा सम्पूर्ण कार्यालय तिम्ले चलाउनु पर्छ भनेका थिए । यसैबीच, आरोपी अंकितले युवतीलाई आफ्नो प्रेममा फसाउन सुरु गरेका थिए ।
युवतीले आफ्नी आमालाई घटनाको बारेमा सबै बताइन् । जब ती युवतीकी आमा, बुहारी र दाइ आरोपितलाई मनाउन गए, उनी झन विवाद गर्न थाले । पीडित युवतीले पीडकलाई दु’र्व्य’व’हा’र र एससी एसटी ऐन अन्तर्गत उजुरी गरेकी छिन् । अर्को घटना बनारसको चौका घाटमा बस्ने २४ वर्षीया युवतीको हो । त्यहाँ लुगाहरू किन्न सूरत आएकी एक युवतीमाथि गलत काम भएको हो ।
७ अक्टुबरमा, उनी बाम्बे बजार नजिक ग्लोबल र नयाँ बम्बे बजार गएकी थिइन । बेलुका ४ बजे युवतीले एक चोली मन पराइन् । उनले चोली लगाएर नाप लिन थालिन् । यसैबीच त्यहाँ काम गर्ने शैलेश चोली लगाउने बहानामा दु’र्व्य’व’हा’र गर्न थाले । शैलेशको ह’र्कतले हैरान भएकी महिलाले १०० नम्बरमा कल गरेर घटनाबारे पुलिसलाई बताइन् । प्रहरीले उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । समाचारको भिडियो हेर्त तल क्लिक गर्नुहाेस्***
मानवतालाई लज्जित पार्ने घटना : भाडा तिर्न नसकेपछि विधवालाई घरेबेटी रुखमा बाँधेर जे गरे!